जावेदको बोल्ड अवतार
नायिका उर्फी जावेद आफ्नो अभिनय र लुक्सका कारण चर्चामा रहन्छिन्। यस पटक भने उनलाई बोल्ड नायिका भनेर उपमा दिन थालिएको छ। उर्फी जावेदले इंस्टाग्रा...
कति शुल्क लिन्छन् ऐश्वर्या र करीनाका मेकअप आर्टिस्ट ?
बलिउड स्टार परफेक्ट लुक्सको पछाडि एक मेकअप आर्टिस्टको अहम भूमिका रहन्छ। मेकअप आर्टिस्ट स्टार्स सानोसानो कुरामा पनि ध्यान दिन्छन्। रिल होस् वा रियलमा अनुहारलाई...
जमानतमा छुटेकी पायल भन्छिन्-बोल्न बन्द गर्दिन्
बलिउड नायिका, मोडल पायल रोहतगी मंगलबार मात्र जमानतमा रिहा भएकी थिइन्। भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरुमाथि आपत्तिजनक टिप्पणी गरेको...
द कपिल शर्मा शो अब अक्षयकुमारले चलाउने !
द कपिल शर्मा शोबाट चर्चित कमेडियन कपिल शर्मा आउट हुने भएका छन् । शर्माले चलाएको उक्त शो अहिले चर्चित भएको छ । अहिले चलिरहेको शो दोस्रो सिजन हो । कपिल शर्मा आउट हुनेभएपछि शो मा को आउँदैछ भन्ने चर्चाको विषय ...
जाडोमा यसरी खुलिन् नायिका अदा
बलिउड नायिका अदा शर्मा हालै रिलिज भएको फिल्म कमान्डो ३ मा देखिएकी थिइन्। अदाको अभियनको धेरैले मन पराए। उनी फिल्म र अभियन बाहेक इन्स्टाग्राममा पनि सक्रिय छिन्। उनले इन्स्टाग्राममा हालै मात्र आफ्ना &nb...
बलिउड नायिका नुसरत भरूचा पछिल्लो समय चर्चामा छिन्। उनका तस्वीर सामाजिक सन्जालमा भाइरल भइरहेका छन्। इन्स्टाग्राममा सक्रिय रहने नुसरतले हालै मात्र केही न...
बलिउड हुँदै हलिउड पुगेकी नायिका प्र‍ियंका चोपडा र उनका पति निक जोनसको ख्याती चुलिदो छ। प्र‍ियंका र निकमा घरपालुवा कुकुरको मोह देखिन्छ । &n...
बिहारको सदर अस्पतालमा अप्रेसन थीएटरमा बिरामीको उपचार भइरहेको थियो। तर, केही व्यक्ति टिकटक भिडियोका लागि भोजपुरी गीतमा नाचिरहेका थिए। गीत पनि य...
बलिउड सुपरस्टार सलमान खान भन्ने गर्छन्, ‘म आफ्नो स्क्रिन अवतार चुलबुल पाण्डेको अस्तित्वलाई महसुस गर्छु।’ २०१० मा रिलिज भएको फिल्म ‘दब...
मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठले मिस वर्ल्डको सबटाइटल मल्टिमिडिया अवार्ड हात पारेकी छिन्। लन्डनमा सञ्चालन भइरहेको ६९औं संस्करणको मिस वर्ल्डमा उनले बिह...
सुन्दर देखिन प्लास्टिक सर्जरी गरेका नायिकाहरू
बलिउडमा धेरै नायिका छन्, जसको सौन्दर्यताको चर्चा अन्य मुलुकमा पनि हुने गरेको छ। तर, तीमध्ये केही यस्ता नायिका छन्, जसले सुन्दर देखिन प्लास्टिक सर्जरीको सहारा ल...
बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्टको मिडियामा छाइरहने गर्छिन् । उनी पछिल्लो समय फिल्म र रणवीर कपूरसँगको अफेयरका कारण पनि सञ्चारमाध्यममा खबर बन्ने गरेकी छन् । अभिन...
मलाइकाको हट अवतार भाइरल [तस्वीरहरू]
बलिउडकी स्टाइलिस अभिनेत्री मलाइका अरोरा बेलाबेलामा चर्चामा रहने गर्छिन् । उमेर बढ्दै जाँदा पनि उनको सुन्दरतामा कुनै कमी आएको छैन । उनी सहभागी पार्टी ...
के विवाहपछि खुशी छैनन् राखी सावंत ?
'कन्ट्रोभर्सी क्वीन'को रूपमा परिचित अभिनेत्री राखी सावन्त बेलाबेलामा चर्चामा रहने गर्छिन् । विवादित बनिरहने भएकाले उनलाई सञ्चारमाध्यमहरूले 'क...
विराट-अनुष्का दोस्रो वैवाहिक वर्षगाँठ मनाउँदै, अनुष्काले गरिन् नयाँ खुलासा
भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली र अभिनेत्री अनुष्का शर्माले आज दोस्रो वैवाहिक वर्षगाँठ मनाउँदै छन् । आजकै दिन सन् २०१७ मा उनीहरूले गोप्य रूपमा विवाह गरेका ...
बिहे भएको वर्ष दिन नबित्दै कमेडियन कपिल बने छोरीको बाबु
चर्चित कमेडियन कपिल शर्मा बाबु बनेका छन् । उनकी पत्नी गिन्नी चरतथले छोरीलाई जन्म दिएकी हुन् । कपिलले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत आफ्ना शुभचिन्तकलाई खुशीक...
रागिनी एमएमएसकी नायिकाको बाथरुममा यस्तो हर्कत, हेर्नुस् फोटो फिचर
रागिनी एमएमएस वेब सीरीजमा चर्चामा आउने गरेकी बलिउड नायिका करिश्मा शर्मा चर्चामा आएकी छिन्। उनले कालो मिनी ड्रेसमा ग्लामर फोटो सार्वजनिक गरेकी हुन्। यी...